ကောင်းမွန်ဝင်း: စားပုံသောက်ပုံ ထူးထွေစုံ
အရပ်ဒေသ၊ နိုင်ငံအလိုက်စားသောက်ပုံဓလေ့တွေ အမျိုးမျိုးရှိကြတာကတော့ အထူးပြောစရာမလို ပါဘူးနော်။ သို.သော်လည်း ကျွန်မတို.မြန်မာပြည်မှာ စားနေတဲ. အစားအစားတွေကိုပဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ စားသောက်ပုံမတူတာ၊ တွဲဘက်စားသုံးပုံ ကွဲပြားတာကို တွေ.ရတဲ. အခါ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး အချင်းချင်း ဖေါက်သည်ချ ပြောပြချင်လာပါတယ်။
ကျွန်မကျောင်းသူဘ၀တုန်းကပေါ.။ အများအားဖြင့် ကျောင်းကို ထမင်းဘူးယူတာများပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှိတဲ. နေ.ဆို အဲဒီ အလုပ်လုပ်တဲ.နေရာက ထမင်းကျွေးပါတယ်။ ထမင်းဘူးလို.ပြောပေမယ့် ဒီလိုပါ။ ထမင်းကို ပေါင်းအိုးတစ်လုံးအပြည့်ချက်ပြီးရင် တစ်ခါစားလောက် အရွယ်တွေခွဲပြီး ပလပ်စတစ် (Plastic wrap) နဲ.ပတ်၊ အထုပ်ပေါ်မှာ နံမည်နဲ. ရက်စွဲတပ်ပြီး၊ အဲဒီအထုပ်တွေကို ကျောင်းက နားနေခန်းထဲမှာရှိတဲ. ရေခဲသေတ္တာရဲ. ရေခဲတဲ. အထပ်ထဲမှာ ထဲ.ပြီးထား တာပေါ့။ အဲဒါကို စားခါနီးရင် မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်နဲ. အပူပေးပြီး စားတာပါ။ ဟင်းကတော့ ၃နပ်စာလောက် ချက်ပြီး၊ ရေခဲသေတ္တာထဲထဲ.သလို၊ အကြော်လေးဘာလေးဝယ်ပြီး စားတာလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုနားနေခန်းပြန်ပြီး နွေးစားချိန်တောင်မရှိတဲ. အခါမျိုးမှာတော့ ကျောင်းက သက်သာဆိုင်တို. အနီးအနား မှာရှိတဲ. ကွန်ဗီနီယန်စတိုးတို.ကိုသွားပြီးဝယ်စားပါတယ်။ ၀ယ်စားတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်မရဲ. ဘတ်ဂျက်က လွန်ရောကျွံရော ယန်း၂၀၀ပါ။ (အစားတစ်မျိုးကို ယန်း၁၂၀နဲ. သောက်ရန်အရည်ကိုတော့ ယန်း၈၀ပေါ့) တကယ့်ကို အဆင်းရဲဆုံး အနေအထားလို.ပြောရင် မမှားပါဘူး။ ဘာလို.လို.လည်းဆိုတော့ အဲဒါဈေးတွေက အနိမ့်ဆုံးဈေး ဖြစ်ပြီး အဲဒီပိုက်ဆံနဲ. ၀ယ်စားလို.ရတာလည်း အလွန်နည်းပါတယ်။ ဆိုင်ထဲဝင်သွားရင်တော့ ဈေးဝယ်ရတာ အရမ်းမြန်ပါတယ်။ အဲဒီဈေးနဲ. ပစ္စည်းက သိပ်မရှိဘူးလေ။ ဆိုင်ထဲရောက်သွားတိုင်း ပထမဦးဆုံးလက်က တန်းရောက်သွားတာက ကိုယ်ဝယ်မယ့် စားစရာရှိတဲ.နေရာ၊ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ မျက်စိထဲတန်းဝင်တာကသူ.အပေါ်က စင်မှာရှိနေတဲ. ခေါက်ဆွဲကြော်ပေါင်မုန်.။
သူက တစ်ခုကို ၁၉၈ယန်း။ ဂျပန်လိုကတော့ ယာကီဆိုးဘ ပမ်း ya ki so ba pann (ခေါက်ဆွဲကြော်ပေါင်မုန်.) လို.ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကိုရောက်ခါစ အချိန်မှာ ကျွန်မအတွက်ကတော့ အဲဒီ ခေါက်ဆွဲကြော်ပေါင်မုန်.ဟာဘယ်လိုမှ မျက်စိကကော၊ ဦးနှောက်ကကော၊ပါးစပ်ကကော၊ဘတ်ဂျက်အရကော၊ တကယ်ကိုလက်မခံနိုင်စရာပါပဲ။ ပေါင်မုန်.ထဲကိုများ ခေါက်ဆွဲကြော်ထဲ့စားရတယ်လို.။ ကြည့်ပါအုန်းလေ၊ ဓါတ်ပုံကို။
ကြိုက်တဲ.သူကတော့ စားချင်မှာပါပဲ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အဲဒီအပေါ်ဆုံးက နီနီတွေက “ဂျင်း”ပါ။ မြန်မာအစားအစာ ဂျင်းသုပ်ရဲ. ဂျင်းအတိုင်းပါပဲ။ ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး အချဉ်နှပ်ထားတာလေ။ ပြောရင်းနဲ. နောက်တစ်ခုကို သတိရလာပြီ။ ဂျပန်မှာ ခေါက်ဆွဲကြော်ကို အဲဒီ ဂျင်းနဲ.စားတာလေ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကြက်သွန်နီ သို.မဟုတ် သခွါးသီး၊အချဉ်။ငရုတ်ဆီအချဉ်ရည်တို.နဲ.စားသလိုမျိုးပေါ.။
ဒီဂျပန်မှာတော့ ခေါက်ဆွဲကြော် ကို ခုနကပြောတဲ. ဂျင်း၊ ပဲငံပြာရည် (အကြဲ)၊ ဆော့စ် လို.ခေါ်တဲ.ပဲငံပြာရည်(အပြစ်) ဆန်ဆန် အရည်တို.နဲ. တွဲဘက်စားကြပါတယ်။ ကဲ၊ ဓါတ်ပုံတွေနဲ. အရသာကို စိတ်မှန်းကြည့်လိုက် ကြပါဦးနော်။
ကိုကာကိုလာ ထဲကို သံပုရာသီးထဲ.သောက်တာ။
ဒီဓလေ့ကလည်း ကျွန်မကို တော်တော်လေးကသိကအောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ၀ယ်သောက်လို. မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါလည်း ကျောင်းသူဘ၀က ဖြစ်ခဲ.တာပါ။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တော့ ဧည့်သည်ကို ကိုကာကိုလာ ထုပ်ပေးတိုင်း အဲဒီကိုကာကိုလာနဲ. အတူ သံပုရာသီး အစိတ်ကလေးကို ထဲ.ပေးရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာအဲလိုသောက်တဲ. အကျင့်မရှိတာကောနမော်နမဲ.အကျင့်ကြောင့်ကော၊ နှစ်ခုပေါင်းပြီး ခဏခဏမေ.လို. ဧည့်သည်ဆီ ဗန်းလေးကိုင်ပြီးအသွား လမ်းတစ်ဝက်ကနေ ပြန်ပြန်ပြီး သံပုရာသီးယူရပါတယ်။ဓါတ်ပုံထဲမှာ သံပုရာသီးနဲနဲများသွားတယ်၊ တကယ်က တစ်ခုလောက်ပဲထဲ.တာပါ။
အိုက်စ်ကရင်မ်ပန်းကန်မှာ ပူတီနံအရွက်လို Mint အမျိုးအစား ဟင်းခေတ်အမွှေးအကြိုင်သုံး အရွက်နဲ. တန်ဆာဆင်တာ။
ဒါလည်းဒီလိုပါပဲ၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်တုန်းကပါ။ ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့အချိန် ဈေးကြီးကြီးနဲ. ရောင်းတဲ. ကော်ဖီဆိုင်ဆန်ဆန်စားသောက်ဆိုင်လေးမှာ၊ စားဖိုပိုင်းလုပ်ရတဲ့ အလုပ်သွားလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာလုပ်ရတဲ.အကြောင်းကတော့ အချိုပွဲမျိုးစုံကို လုပ်တတ်ချင် လို.ပါ။ အဲဒီဆိုင်ရဲ. အချိုပွဲတွေထဲမှာ ဆိုင်ရဲ. ကိုယ်တိုင်လုပ်ရေခဲမုန်. နှစ်မျိုးလည်းပါပါတယ်။ ရေခဲမုန်.တွေက သိပ်ပြီးစားချင်စရာကောင်း ပါတယ်။ သူ.ကို ပန်းကန်လှလှလေးထဲမှာ အနုပညာလက်ရာမြောက်မြောက်ထဲ.လိုက်ပါတယ်။တော်တော်လှပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပူတီနံအရွက်လို Mint အမျိုးအစား အရွက်ကိုအသာလေး တင်လိုက် တာပေါ.။အဲဒီအရွက်ကကျွန်မတို.မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟင်းခေတ်အမွှေးအကြိုင်သုံး အရွက်၊ တို.စရာတစ်မျိုး အနေနဲ.စားတာလေ။ အခု လို ဗိုလ်အစားအစာ၊ ဂျပန်အပြင်အဆင်နဲ. ဒီပူတီနံအရွက်ကြီးက ကျွန်မအတွက်တော့ အို၊ တကယကို ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ အမြဲတမ်း အဲဒီအရွက်ကလေးကို နောက်ဆုံးတင်လိုက်တိုင်း သက်ပြင်းတစ်ချက်ချမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စောင့်ကြည့်နေတဲ. စားဖိုမှူးက ကျွန်မကို ပန်းကန်အပြင်အဆင် လုပ်တာ မလှမှာစိုးရိမ်နေတယ်ထင်ပြီး“မွန်စံ။ ကောင်းတယ်လေ၊ လှတယ် ၊ စိတ်မပူနဲ.၊ သိပ်ကောင်းတဲ. အပြင်အဆင်ပဲ”လို.ပြောပြီး အားပေးရှာတယ်။
အထက်က အစားအသောက်တွေရဲ. တွဲဘက်ပုံကို မကြိုက်ပေမယ့်၊ ကျွန်မအကြိုက် ဂျပန်ရိုးရာအစားအသောက်တစ်ခုကိုလည်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အိုနီးဂိရိ O ni gi ri လို.ခေါ်တဲ. ထမင်းဆုပ်ပါ။ သူကတော့ လက်နှစ်ဘက်မှာ ဆားနဲနဲ သုတ်ပြီး ထမင်းပူပူနွေးနွေးကို ဆုပ်ဆုပ်ပြီး အလယ်ကောင်မှာ ဆာငံသီး အစို၊ ဂျပန်လိုကတော့ အုမဲဘိုရှိ (pickled plum ) ကို ထဲ.ပြီး တြိဂံပုံစံလေး ဆုပ်လုံးပြီး၊ ရေညှိအခြောက် (ဂျပန်လိုကတော့ နိုရိ )နဲ.ပတ်ပြီးစားတာပါ။ ထမင်းထဲကို ဆားငံသီး အစိုထဲ.ဆုပ်ပြီး အများအားဖြင့်မနက်စာအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ အဆာပြေအဖြစ် တစ်နေကုန် ဘယ်အချိန်မှာစားစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြိုက်တဲ.သူအတွက်တော့ တမျိုးကြီးပဲလို. ထင်မှာပေါ.နော်။ ကျွန်မကတော့ အိုနီးဂိရိကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အထဲက ဆားငံသီးအစား၊ အခြားဌာပနာ အမျိုးမျိုး။ ဥပမာ- ကြံမဆိုင်ရွက်(Brassica juncea var. integlifoli ကိုချဉ်ပတ်လုပ်ထားတာ) ၊ တူနာငါး (tuna)နဲ. မာယောနစ်စ် (mayonnaise)၊ ကြက်သားနဲ.မာယောနစ်စ်၊ ငါးဥဆားနယ်( salted cod roe )ကို ထဲ့ထားတဲ. အိုနီးဂိရိတွေလည်းအမျိုးစုံအောင်ရှိပါတယ်။
နောက်ကြုံရင် အဲလို ဆန်းဆန်းပြားပြားတွဲဘက်စားတာလေးတွေတွေ.စားကြည့်တော့မယ်။ အရသာပါသိရအောင်လို.ပေါ.နော်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, September 18, 2009
အစ်မ ကောင်းမွန်ဝင်းရေ မမြင်ဖူးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အစားအစာတွေကို လေ့လာဖတ်ရှုရင်းသွားပါတယ်။ သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇာတ်ဆိုသလိုပဲနော် ကိုယ့်အတွက် ဆန်းပေမယ့် ကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့လည်း ဟုတ်နေပြန်တာပါပဲ။